Halkuu marayaa qorshaha lagu hormarinayo hanaanka cadaladda dalka? - Bandhiga Media
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in uu socdo Qorshe lagu hormarinayo hanaanka Cadaaladda dalka
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Mudane Xasan Xuseen Xaaji oo Wareysi gaar ah siiyay warbaahinta dowladda ayaa waxaa uu ka hadlay Hirgalinta nidaamka Cadaaladda dalka oo ay wadaan, Islamarkaana latashiyo kala duwan kala sameeyeen Dowlad Goboleedyada dalka ka jira iyo Qeybaha kala duwan ee Ururadda Bulshada Rayidka ah.
Wasiirka ayaa sheegay in Nidaamka Cadaaladda ladoonayo in uu lajaan qaado Nidaamyadda Cadaaladda ee dunida ka jira lehna awoodihii lagu fulin lahaa.
Wasiirka ayaa sheegay in Hanaankaas laga hirgalin doono Dhamaan dalka si ay dadk Soomaaliyeed u helaan Nidaam Cadaaladeed oo wanaagsan.
Dhanka kale Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa maanta daah furay kulanka howl-galinta habraaca nidaamka habka dadban ee xalinta khilaafaadka ee dalka oo dhan, waxaana ka qeyb galaya mas’uuliyiin ka socoto mamul goboleedyada dalka.